Job 21 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Job sara ihe a gwara ya (1-34)
‘Gịnị mere ihe ji agaziri ndị ajọ omume?’ (7-13)
O kwuru na ndị na-akasi ya obi ebughị ezigbo ihe n’obi (27-34)
21 Job wee sị: 2 “Geenụ ntị nke ọma n’ihe m na-ekwu,Ka ọ bụrụ otú unu ga-esi kasie m obi. 3 Nweerenụ m ndidi ka m kwuo okwu. M kwuchaa, unu nweziri ike ịkwa m emo.+ 4 Ọ̀ bụ mmadụ ka m na-ekpesara? Ọ bụrụ na ọ bụ mmadụ, ọ̀ bụ na ike inwe ndidi agaghị agwụ m? 5 Lewenụ m anya, ka akpata oyi wụọkwa unu n’ahụ́. Kpuchienụ aka n’ọnụ. 6 M chewe banyere ya, obi anaghị ezu m ike,Ahụ́ m niile na-amakwa jijiji. 7 Gịnị mere ndị ajọ omume ji adị ndụ,+Kaa nká, baakwa ọgaranya?*+ 8 Ha na-ahụ ka ụmụ ha na-eto ghọọ mmadụ,Ha na-ahụkwa ụmụ ụmụ ha. 9 Udo na-adị n’ụlọ ha. Ụjọ anaghị atụ ha,+Chineke anaghịkwa ata ha ahụhụ. 10 Oké ehi ha na-agba nne ehi n’enweghị nsogbu ọ bụla. Nne ehi ha na-amụ ụmụ, ime anaghịkwa apụ ha. 11 Ụmụaka ha ndị nwoke na-agbagharị n’èzí otú ewu na atụrụ si agbagharị,Ụmụ ha na-awụgharịkwa. 12 Ha na-eji obere ịgbà na ụbọ akwara agụ egwú,Na-aṅụrịkwa ọṅụ mgbe ha na-anụ ụda ọjà.+ 13 Ha na-enwe obi ụtọ n’oge niile ha dị ndụ,Ha na-anwụkwa n’udo,* e lie ha n’ili.* 14 Ma ha na-asị ezi Chineke, ‘Hapụ anyị aka! Anyị achọghị ịma ihe i nyere n’iwu.*+ 15 Ònye bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nke mere anyị ga-eji fee ya?*+ Olee uru anyị ga-erite ma anyị na ya dịrị ná mma?’+ 16 Ma ama m na ọ bụghị ha na-eme ka ihe na-agaziri ha.+ Anaghị m eche echiche otú ndị ajọ omume si eche.+ 17 Ugboro ole ka e menyụrụla ọkụ* ndị ajọ omume?+ Ugboro ole ka ọdachi na-abịara ha? Ugboro ole ka Chineke jitụrụla iwe bibie ha? 18 È nwere mgbe ha na-adị ka ahịhịa ọka* ifufe na-ebugharị,Ma ọ̀ bụ ka mkpo ọka oké ifufe na-ebupụ? 19 Ọ bụrụ na mmadụ emee ihe ọjọọ, Chineke ga-ata ụmụ ya ahụhụ ihe o mere. Ma ka Chineke kwụọ ya ụgwọ ihe o mere ka ọ hụ ya.+ 20 Ka o jiri anya ya hụ otú a ga-esi laa ya n’iyi,Ka ọ bụrụkwa ya ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ga-ewesa iwe ya.*+ 21 N’ihi na ọ bụrụ na ọ nwụchuo ọnwụ,È nwere ihe na-eme n’ụlọ ya ka gbasara ya?+ 22 È nwere onye ga-akụziri Chineke ihe,+Ebe ọ bụ Chineke na-ekpe ndị kacha elu ikpe?+ 23 Otu onye na-anwụ mgbe ike ndụ ka juru ya ahụ́,+Mgbe ọ na-enweghị ihe ọ bụla na-echegbu ya nakwa mgbe obi ruru ya ala,+ 24 Mgbe apata ụkwụ ya bụ abụba abụba,Mgbe ọkpụkpụ ya ka gbasikwara ike.* 25 Ma onye ọzọ na-atagide ahụhụ nwụọ,N’enweghị mgbe o kporiri ndụ. 26 Ha abụọ ga-alaghachi n’ájá,+Ikpuru ga-ekpuchikwa ha abụọ.+ 27 Lee, ama m ihe unu na-eche,Marakwa atụmatụ unu chọrọ iji mesie m ike.+ 28 N’ihi na unu na-asị, ‘Oleezi ụlọ onye ahụ a ma ama? Oleekwa ụlọikwuu onye ajọ omume bibu?’+ 29 Ọ̀ bụ na unu ajụbeghị ndị na-aga ebe dị iche iche ase? Ọ̀ bụ na unu anaghị echebara ihe ndị ha chọpụtara echiche nke ọma, 30 Na a na-ahapụ onye ọjọọ ndụ n’ụbọchị ọdachi, Napụtakwa ya n’ụbọchị oké iwe? 31 Ònye ga-ajụ ya ajụjụ maka ihe ọ na-eme? Ònyekwa ga-akwụ ya ụgwọ ihe o mere? 32 Mgbe a na-ebuga ya n’ebe a ga-eli ya,A ga-eche ili ya nche. 33 Ájá ndị e ji kpochie ya ga-atọ ya ụtọ,+Mmadụ niile na-esorokwa ya n’azụ*+ Ka imirikitiimi ndị bu ya ụzọ. 34 Gịnịzi mere unu ji jiri okwu na-enweghị isi na-akasi m obi?+ Ihe niile unu na-aza m bụ ụgha.”
^ Ma ọ bụ “bụrụkwa ndị ukwu.”
^ Ma ọ bụ “n’otu ntabi anya,” ya bụ, ha na-anwụ n’ataghị ahụhụ.
^ Na Hibru, “ịmata ụzọ gị.”
^ Na Hibru, “jeere ya ozi.”
^ Na Hibru, “ga-aṅụ ọnụma Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.”
^ Na Hibru, “Mgbe ụmị ọkpụkpụ ya ka dị mmiri mmiri.”
^ Na Hibru, “Ọ ga-adọkpụrụkwa mmadụ niile ka ha soro ya.”